बालबालिका र युवामा दसैँको रौनक, वृद्धवृद्धा पहिलेकै दसैँ सम्झन्छन्
इटहरीः नेपालीहरुको महान चाड दसैँ भित्रिसकेको छ । असत्यमाथि सत्यको जित भएको उत्सवको रुपमा मनाइँदै आएको दसैँको रौनक अन्यलाई भन्दा बालबालिका र युवाहरुलाई बढी हुन्छ । बालबालिका र युवा दसैँको उन्मादमा रमाउँदा वृद्धवृद्धा भने उनीहरुको बालापन र युवा उमेरमा मनाइने दसैँ सम्झन्छन् । अहिले गाउँघर पहुना र शहरबाट आउनेबाट भरिभराउ छन् । अन्य समयमा सुनसान रहने गाउँघर यो बेला गुञ्जयमान बनेको छ । युवाहरु साथीभाइसँगको लामो सयमपछिको भेटटमा रमाइरहेका छन् भने बालबालिकाहरु दसैँमा टिका र जमरासँगै पाइने दक्षिणा (पैसा) को हिसाब गर्दै आवश्यकताको श्रृङ्खला बनाउँदै छन् ।
‘मलाई त यो वर्षको दसैँ आएको आभास भएको छ’, संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका ९ स्थायी घर भइ राष्ट्रसेवक कर्मचारीका रुपमा काम गर्दै आएका श्याम तामाङले भने, ‘टिका लगाउने मात्र मेरो लागि दसैँ होइन । पहिले हामीसँगै पढेका, बढेका साथीहरुसँग भेट भएको छ, यहि नै रमाइलो छ मलाई ।’ १० दिनको दसैँ बिदा लिएर दुई वर्षपछि घर आएका उनको अधिकांश समय घरमा भन्दा साथीभाइसँग भेटघाटमा नै बित्छ । उनीजस्तै सोही ठाउँका सन्तोष खत्री पनि घर आइपुगेका छन् । सन्तोषको परिवारमा यो वर्ष टिका लगाउन हुँदैन । उनको आफन्तको निधन भएकाले दसैँ खाली निधारमा नै सकिने निश्चित छ । तर उनमा दशैंको रौनक भने पहिलेको भन्दा कम छैन । ‘दुई वर्षपछि घर आएको छु दसैँ मनाउन । मान्छ बितेकाले टिका लगाउन हुँदैन’, उनले भने, ‘तर मलाई त धेरैपछि घर आउन पाएकाले यही दसैँ रमाइलो लागेको छ । टिका लगाउन नपाएपनि साथीभाइहरुसँग भेट हुन्छ । यही मज्जा छ ।’ श्याम र सन्तोषजस्ता युवामा मात्र होइन, बालबालिकाहरुमा पनि दसैँको रौनक अनि उत्साह सुरु भएको छ । बालबालिकाहरुलाई दसैँ भन्नेबित्तिकै पैसाको सम्झना आउँछ । दसैँको दक्षिणाको महत्व बालबालिकाहरुलाई भन्दा अरुलाई सायदै थाहा होला । यही कारण पनि बालबालिकामा दसैँ आउनासाथ उत्साह र उमंग सुरु हुन्छ । दुई वर्षपछि मावली घर टिका लगाउन आएका आयुष कार्की मावलीघरको पेटिमा बसेर यो वर्ष कमाइने दक्षिणाको हिसाब लाउँदै छन् । त्यो पैसा लगेर साथीहरुलाई देखाउने उनको ध्येय छ ।
बालबालिका र युवामा दसैँको रौनक छाए पनि वृद्धवृद्धामा रौनक कम, सम्झना बढी छ । अहिलेको दसैँ वृद्धवृद्धालाई दसैँजस्तो नै लाग्दैन । ‘आहा ! त्यो बेलाको दसैँ । एक÷डेढ महिना अघिदेखि नै चाँजोपाँजो सुरु हुन्थ्यो’, संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ की ७५ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक दिलमाया कँडेलले भनिन्, ‘चिउरा ढिकीमा कुटिन्थ्यो । रातोमाटो लिन गाउँभरका सबै जान्थे । कसले कति रातो माटो ल्याउने भनेर तँछाडमछाड हुन्थ्यो ।’ उनको नजरमा अहिलेको दसँैमा त्यो रौनक छैन । पसलबाट किनेको चिउरा र रंगिविरंगी रङ्गले पहिलेको जस्तो दसैँको रौनक नआउने उनको बुझाइ छ । ‘ए......अहिले त उ त्यहाँ (घरनजिकै रहेको पसलमा) गयो । जे जे चाहिन्छ ल्याउँदा हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘तर पहिले ढिकीमा कुटेको चिउराजस्तो स्वादिलो त कहाँ हुन्छ र ! रंग पनि के के हुन् के के अहिले त । तर पहिलेजस्तो राम्रो त मलाई लाग्दैन । हाम्रै पालाको दसैँ रमाइलो ।’
यो कारण मात्रै नभएर अन्य कारकले पनि उनलाई मात्र नभएर अन्यलाई पनि दसैँको रौनक हराएको हो कि झैं लाग्छ । उनको गाउँमा पहिले झण्डै आधा दर्जन पिङ हुन्थ्ये । अहिले त्यो संख्या घटेर एकमा झरेको छ । हुन त अहिले घरैपिच्छे कसैको बार्दलीमा त कसैको पाली (गाईगोठ) मा पिङ छन् । सामूहिक रुपमा पालो पर्खनुपर्ने बाध्यता त यसले हटायो तर लिङ्गेपिङको मज्जा भने दिन सकेन । आजभन्दा एक दशकअगाडिसम्म यो ठाउँमा उल्लेख्य मात्रामा पिङ थिए । रातोमाटो लिन जानेको लाम थियो । अनि हप्तौँ लगाएर ढिकीमा चिउरा कुट्ने भेटिन्थे । अहिले यो सबै नगन्य मात्रामा मात्र छ ।